ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအနေဖြင့် သင်တန်းသားများကို အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ပြည့်ဝစွာဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Read More >>
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့ကို Institute of Planning and Project Research-IPPR Engineering International အဖွဲ့အစည်းက စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အတူ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၂၉-၁၀-၂၀၀၈) ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပြီး အမှတ်စဉ်(၁) သင်တန်းကို (၁၆-၁၀-၂၀၀၈)နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Read More >>
စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)သည် သင်တန်းသား အသစ်များကို နှစ်စဉ်ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းသားများသည် အခြေခံအားဖြင့် ဒဿမတန်းဖြေဆိုဘူးသူ အသက် ၂၅ နှစ် ထက်မကြီးသူ အိမ်ထောင်မရှိသူ ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်သူ စသည်ဖြင့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်ထားလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတန်း အထောက်အထားများ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများကို Read More >>
1. Machine Tools Operator Course
2. CAD/CAM & CNC Course
3. Electrician Course
4. Welder Course
နောက်ဆုံးရ သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ
Post by ITC Mandalay | 2020-12-17
သင်ထောက်ကူ Video များ
Our gym floor is as spacious as they come. Enjoy scenic views from the cardio equipment on the third floor.
Included in our facility isa"ladies only" section of the gym where women can workout to themselves.